အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ရှေးကောကျပှဲကွညောစာတမျး (၂၀၂၀) – Federal Journal
အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ရှေးကောကျပှဲကွညောစာတမျး (၂၀၂၀)
၁။ တိုငျးရငျးသားအရေးနှငျ့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရဒေ
၂။ စဈမှနျသော ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျပွညျထောငျစု ဖွဈထှနျးစမေညျ့ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ ပျေါပေါကျရေး
၃။ ရရှေညျတညျတံ့ခိုငျမွဲမညျ့ လုံခွုံဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး
ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျပွညျထောငျစုတညျဆောကျရေးနှငျ့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရရှိရေး၊ ပွညျသူလူထု အကြိုးပွုရေးတို့ကို ရှေးရှုပွီး ဒီမိုကရစေီအသှငျကူးပွောငျးရေးကာလနှငျ့ ဆီလြျောစရေနျ တညျဆဲဥပဒမြေားကို ပွငျဆငျခွငျး၊ ပယျဖကျြခွငျး၊ အသဈပွဌာနျးခွငျးတို့ ပွုလုပျမညျ။
(က) ခတျေစနဈနှငျ့ညီညှတျသော ဥပဒမြေားဖွဈစရေနျ။
(ခ) ဒီမိုကရစေီစံခြိနျစံညှနျးမြားနှငျ့ ညီညှတျမှုရှိစရေနျ။
(ဂ) လူ့အခှငျ့အရေးစံခြိနျစံညှနျးမြားနှငျ့ ညီညှတျမှုရှိစရေနျ။
(ဃ) ပွညျသူလူထုအပျေါ ဖိနှိပျခြုပျခွယျသော ဥပဒမြေိုး မဖွဈစရေနျ။
(င) နိုငျငံတကာ စာခြုပျစာတမျးမြား၊ ကှနျဗငျးရှငျးမြား၏ ဆုံးဖွတျခကျြမြားနှငျ့ ဆီးလြျောစရေနျ။
(စ) ပွညျသူမြားအကွား သဟဇာတဖွဈရေး၊ သှေးစညျးညီညှတျရေးကို မွှငျ့တငျနိုငျစရေနျ။
ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျပွညျထောငျစုတညျဆောကျနိုငျရနျ ကောငျးမှနျသောအုပျခြုပျရေး မရှိမဖွဈလိုအပျ သညျ။ ကောငျးမှနျသောအုပျခြုပျရေးဖွဈထှနျးစရေနျ ဒီမိုကရစေီအသှငျကူးပွောငျးရေးကာလနှငျ့ လိုကျလြောညီထှရှေိ စမေညျ့ အုပျခြုပျရေးမူဘောငျမြားကို ခမြှတျရပါမညျ။
(က) စှမျးဆောငျရညျပွညျ့ဝပွီး အဂတိကငျးသော အစိုးရတဈရပျဖှဲ့စညျးနိုငျရနျ။
(ခ) တရားမြှတမှု၊ လှတျလပျမှု၊ တနျးတူညီမြှမှု ထှနျးကားစရေနျ။
(ဂ) တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးကို အထောကျအကူဖွဈရနျ။
(ဃ) ပွညျသူလူထု၏ စိတျလုံခွုံမှုနှငျ့ ကိုယျလုံခွုံမှုကို တရားမြှတစှာ အကာအကှယျပေးရနျ။
(င) ဥပဒအေရာတှငျ အားလုံးအညီအမြှဖွဈသညျဟူသော မူအရ တရားနညျးလမျးတကြ မြှမြှတတဖွဈစရေနျ။
(စ) ပွညျသူလူထုအားဖိနှိပျသညျ့ ကိရိယာမဖွဈစဘေဲ ပွညျသူလူထုအကြိုးကို ကာကှယျပေးသညျ့ စီမံခနျ့ခှဲမှုယန်တရားဖွဈစရေနျ။
(ဆ) ပွညျသူလူထုအပျေါတှငျ စိတျရငျးစတေနာမှနျဖွငျ့ ဝနျတောငျမှုပေးရနျ။
တရားမြှတပွီး ဘကျလိုကျမှုကငျးသညျ့ တရားစီရငျရေးစနဈကို ထူထောငျရနျ ဆောငျရှကျမညျ။
(က) ပွညျထောငျစုတရားလှတျတျောခြုပျသညျ နိုငျငံတျော၏ အမွငျ့ဆုံးတရားရုံးဖွဈသညျ။
(ခ) နိုငျငံတျော၏ တရားစီရငျရေးအာဏာကို တရားလှတျတျောခြုပျ၊ တိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ပွညျနယျတရား လှတျတျောမြားနှငျ့ အဆငျ့ဆငျ့သော တရားရုံးမြားအား ခှဲဝအေပျနှငျးသညျ။
(ဂ) ဥပဒနှေငျ့အညီ လှတျလပျစှာတရားစီရငျရေး၊ ဥပဒအေရကနျ့သတျခကျြမှအပ ပွညျသူ့ရှမှေ့ောကျတှငျ တရားစီရငျရေး၊ အမှုမြားတှငျ ဥပဒအေရ ခုခံခပြေခှငျ့နှငျ့ အယူခံပိုငျခှငျ့ရှရိရေးတို့သညျ တရားစီရငျရေးမူမြားဖွဈသညျ။
(ဃ) မညျသူ့ကိုမဆို ဥပဒအေရ ပွဈမှုထငျရှားစီရငျခွငျး မရှိသေးသမြှ အပွဈကငျးသညျဟု မှတျယူရေး၊ ထငျကွေးဖွငျ့ အပွဈမပေးရေး၊ သံသယအကြိုးကို တရားခံအား ခံစားခှငျ့ပေးရေးတို့ကို တရားစီရငျရေး၏ စံမြားအဖွဈ သတျမှတျသညျ။
(င) ပွညျသူလူထုအတှကျ တရားမြှတပွီး ဘကျလိုကျမှုကငျးသညျ့ တရားစီရငျရေးစနဈကို ထူထောငျမညျ။
တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား၏ အခှငျ့အရေးကာကှယျစောငျ့ရှောကျသညျ့ ဥပဒနှေငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ ရရှေညျတညျတံ့ခိုငျမွဲပွီး ဟနျခကျြညီသော ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုစီမံကိနျး (MSDP)တို့နှငျ့အညီ ဖွဈစရေနျ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား၏ အခှငျ့အရေးမြားကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျဆောငျရှကျမညျ။
(၁) တနျးတူညီမြှသော နိုငျငံသားအခှငျ့အရေးမြားနှငျ့ ကိုယျပိုငျပွဌာနျးခှငျ့ရရှိပွီး ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျ ပွညျထငျေစုတညျဆောကျရေး။
(၂) တိုငျးရငျးသားအခငျြးခငျြး စညျးလုံးညီညှတျရေး၊ ခဈြကွညျလေးစားရေးနှငျ့ ရိုငျးပငျးကူညီရေးတို့ တိုးတကျဖွဈထှနျးရေး။
(၃) ပွညျတှငျးလကျနကျကိုငျပဋိပက်ခမြား၏ အရငျးအမွဈမြားကို ဖွရှေငျးနိုငျရနျ အပွနျအလှနျလေးစားမှုရှိသော နိုငျငံရေးတှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲမြားဖွငျ့ ညှိနှိုငျးအဖွရှောရေး၊ ရရှေညျတညျတံ့ခိုငျမွဲသညျ့ ငွိမျးခမျြးရေးရှရိရေး။
(၄) ပွညျထောငျစုကွီး ငွိမျးခမျြးသာယာရေး၊ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ တညျတံ့ခိုငျမွဲရေးတို့အတှကျ ပွညျထောငျစုစိတျဓာတျအခွခေံ၍ ထာဝစဉျလကျတှဲနတေိုငျရေး။
(၅) တိုငျးရငျးသားမြား၏ စကား၊ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ယဉျကြေးမှု၊ ရိုးရာဓလထေုံ့းတမျး၊ အမြိုးသားရေး လက်ခဏာနှငျ့ သမိုငျးအမှအေနှဈတို့ကို ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး။
(၆) ပွညျနယျ/တိုငျးဒသေကွီးအားလုံ ဟနျခကျြညီညီဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစရေေး။
(၇) သဘာဝ အရငျးအမွဈမြားမှ ရရှိလာသညျ့ အကြိုးအမွတျမြားကို ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုမူနှငျ့အတူ ဒသေအလိုကျ မြှတစှာခှဲဝခေံစားခှငျ့ရရှိရေး။
(၁) နိုငျငံတကာနှငျ့ဆကျဆံရေးတှငျ လှတျလပျ၍ တကျကွှသညျ့ နိုငျငံခွားရေးမူဝါဒကို ကငျြ့သုံး၍ ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုရရှိအောငျ ဆောငျရှကျမညျ။ ကမ်ဘာ့ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ နိုငျငံအခငျြးခငျြး မိတျဝတျမပကျြ ဆကျဆံရေးကို ရှေးရှုမညျ။ ငွိမျးခမျြးစှာအတူ ယှဉျတှဲနထေိုငျရေးမူကို စောငျ့ထိနျးမညျ။
(၂) နိုငျငံတကာနှငျ့ ဆကျဆံရာ၌ ဖွဈပျေါလာသညျ့ ကိစ်စရပျမြားတှငျ စဈမှနျသော ဒီမိုကရစေီစံနှုနျးမြားကို အခွခေံ၍ လူသားမြားအကွား သဟဇာတဖွဈရေးကို မွှငျ့တငျသညျ့မူအပျေါ ခိုငျမာစှာရပျတညျမညျ။
(၃) ကမ်ဘာ့ကုလသမဂ်ဂ၊ ကမ်ဘာ့ဘဏျ၊ နိုငျငံတကာ ငှကွေးရနျပုံငှအေဖှဲ့စသညျတို့နှငျ့ ရငျးနှီးခငျမငျစှာ ဆကျဆံမညျ။
(၁) တပျမတျော၏ အဓိကတာဝနျအဖွဈ နိုငျငံနှငျ့ နိုငျငံသူ၊ နိုငျငံသားမြားကို ကာကှယျရနျ။
(၂) ပွညျသူတို့ ယုံကွညျအားကိုးသော တပျမတျောဖွဈရနျ။
(၃) တပျမတျောသညျ ဒီမိုကရစေီ စံနှုနျးစံထားမြားနှငျ့အညီ ပွညျသူက ရှေးခယျြတငျမွှောကျထားသော အစိုးရ၏ မူဝါဒအပျေါရပျတညျရနျ။
(၄) စဈရေးစှမျးရညျထကျမွတျ၍ နညျးပညာပိုငျးဆိုငျရာ တိုးတကျခတျေမီသညျ့ တပျမတျောဖွဈရနျ။
(၅) ပွညျသူတို့ ခဈြခငျအားကိုးသော ရဲတပျဖှဲ့ဖွဈရနျ။
(၆) တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးအတှကျ ဥပဒနှေငျ့အညီ ဆောငျရှကျသော ရဲတပျဖှဲဖွဈရနျ။
(၇) ဒီမိုကရစေီစံနှုနျးမြားကို အခွခံသညျ့ တညျငွိမျအေးခမျြးသော လူမှုအသိုငျးအဝနျး ထှနျးကားရေး ပံ့ပိုးရနျ။
(၈) အရညျအသှေးပွညျ့ဝသညျ့ ခတျေမီတိုးတကျသော ရဲတပျဖှဲ့ဖွဈရနျ။
(၁) ရရှေညျအမွျောအမွငျဖွငျ့ ဆနျးသဈတီထှငျသော ဈေးကှကျစီးပှားရေးစနဈ ဖွဈပျေါလာစရေနျ။
(၂) ပုဂ်ဂလိကစီးပှားရေးကဏ်ဍကို အားပေးခွငျးနှငျ့ အစိုးရ-ပုဂ်ဂလိက ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျးဖွငျ့ လူသားအရငျးအမွဈမြား တိုးတကျလာစရေေး။
(၃) အသေးစား၊ အငယျစားနှငျ့ အလတျစား စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားကို အားပေးမွှငျ့တငျရေး။
(၄) တာဝနျယူမှုရှိပွီး အရညျအသှးပွညျ့ဝသညျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြား ပိုမိုဝငျရောကျလာရေးနှငျ့ အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးမြား ဖနျတီးနိုငျမညျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြားကို ခှငျ့ပွုပေးရေး။
(၅) နိုငျငံတျော၏ အကြိုးစီးပှားကိုဖျောဆျောသညျ့ တာဝနျယူမှု၊ တာဝနျခံမှုရှိသော ပွညျတှငျးပွညျပ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြား ဖိတျချေါဆောငျရှကျရေး။
(၆) COVIDE-19 ကွောငျ့ စီးပှားရေးထိခိုကျမှုမြား လြော့ပါးသကျသာလာစရေေးနှငျ့ နိုငျငံစီးပှားရေး ပွနျလညျဦးမော့လာစရေေး။
(၇) ဈေးကှကျတဈခုတညျးကို မူတညျနမေညျ့အစား အခွားနိုငျငံမြားသို့လညျး ဈေးကှကျပိုမိုခြဲ့ထှငျရေး။
(၈) ခတျေမီစိုကျပြိုးရေးစနဈဖွငျ့ နိုငျငံစီးပှားရေး တိုးတကျလာအောငျ ဆောငျရှကျပွီး အခွားနိုငျငံမြားသုိ့ ဈေးကှကျမြား ခြဲ့ထှငျရေး။
(၁) လုပျကှကျငယျတောငျသူလယျသမားမြားနှငျ့ လယျမဲ့ယာမဲ့မြားအတှကျ မွယောသဈမြားဖျောထုတျပွီး မွယောလုပျပိုငျခှငျ့မြားရရှိရနျ ဆောငျရှကျပေးရေး။
(၂) ပွညျသူလူထု စားနပျရိက်ခာနှငျ့ အာဟာရဖူလုံမှုရရှိရေးနှငျ့ လုပျကှကျငယျ တောငျသူလယျသမားမြား အနဖွေငျ့ ထုတျလုပျနိုငျစမျးအား မွငျ့မားလာစပွေီး ဝငျငှမွေငျ့မားလာစရေေး.
(၃) မွနျမာ့ရေးမွသေဘာဝနှငျ့ ကိုကျညီပွီး အရညျအသှေးကောငျးမှနျသညျ့ လယျယာသုံးစကျကိရိယာမြား ပိုမိုသုံးစှဲနိုငျရေး။
(၄) ရခြေိုရငေနျ ငါးဖမျးဆီးလုပျကိုငျမှုမြား ဥပဒနှေငျ့အညီ ဖွဈစရေေး။
(၅) ပငျလယျကမျးနီးကမျးဝေးငါးမြား မပွုနျးတီးရေးနှငျ့ ငါးခိုးဖမျးမှုမြားကို ဥပဒနှေငျ့အညီ ကာကှယျတားဆီးရေး။
(၆) လယျယာသားငါး ထုတျကုနျမြား တိုးတကျထုတျလုပျနိုငျရေးအတှကျ စိုကျပြိုးမှေးမွူရေးအထူးဇုနျမြား တညျထောငျရေး။
(၇) စိုကျပြိုးမှေးမွူရေးလုပျငနျးမြားတှငျ လိုအပျသညျ့ ငှကွေေး အရငျးအနှီး၊ ခြေးငှအေထောကျအပံ့၊ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှငျ့ သှငျးအားစုမြား ရှရိရနျ ကူညီဆောငျရှကျပေးရေး။
(၈) နိုငျငံတကာစံခြိနျစံညှနျးမီ မွသွေဇာ၊ ပိုးသတျဆေး၊ ပေါငျးသတျဆေးနှငျ့ အခွား စိုကျပြိုးမှေးမွူရေးဆိုငျရာ ရောဂါကာကှယျဆေးမြား၊ ဆေးဝါးမြား စနဈတကသြုံးစှဲနိုငျရေး။
(၉) မြိုးကောငျးမြိုးသနျ့ မြိုးစသှေ့ငျးအားစုမြား ရှရိရေး။
(၁၀) ဒသေမြိုးစိတျမြားဖျောထုတျပွီး တရားဝငျဖွဈစရေေး။
(၁၁) စိုကျပြိုးရေးကို အခွခေံသော ခတျေမီစကျမှုလယျယာစနဈကို တဈဆငျ့ခငျြးဖွငျ့ ဖွဈပျေါနိုငျရနျ အားပေးကူညီရေး။
(၁၂) သဘာဝမွသွေဇာမြား ပိုမိုသုံးစှဲနိုငျရေး၊ သွဂဲနဈမွသွေဇာမြား ထုတျလုပျသုံးစှဲမှု တိုးတကျလာစရေေးနှငျ့ သွဂဲနဈနညျးပညာမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာစရေနျ ကူညီအားပေးရေး။
(၁၃) အမယျစုံသီးနှံမြား စိုကျပြိုးရေးနှငျ့ ဈေးကှကျသဈမြားရရှိရေး။
နိုငျငံသားတိုငျး မှေးဖှားခြိနျမှ အစပွုကာ ဘဝတဈလြှောကျလုံး စဉျဆကျမပွတျ သငျယူနိုငျမညျ့ ပညာရေး အခှငျ့အလမျးမြား ရရှိရနျနှငျ့ အကြိုးရှိသညျ့ ပညာရပျမြား တတျမွောကျကွရနျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျမညျ။
(၁) အခမဲ့ မသငျမနရေ မူလတနျးပညာရေးကို ဦးတညျအကောငျအထညျဖျောရေး။
(၂) ကြောငျးနအေရှယျ လူငယျအားလုံး ပညာသငျယူခှငျ့ ရရှိရေးအတှကျ ပညာရေး အထူးဝနျဆောငျမှု အစီအစဉျမြား အပါအဝငျ လူတိုငျးအကြုံးဝငျ ပညာရေးအစီအစဉျ ထားရှိရေး။
(၃) လူမှုစီးပှားဘဝတှငျ လကျတှအေ့သုံးခနြိုငျသညျ့ ပညာရေး ဖွဈရေး။
(၄) ပညာရပျနယျပယျအားလုံးကို တဈပွေးညီ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစပွေီး နိုငျတျော၏ လူမှုစီးပှားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုအတှကျ အရညျအသှေးမွငျ့မားသညျ့ လူ့စှမျးအားအရငျးအမွဈမြားဖွဈသော အသိပညာရှငျ၊ အတတျပညာရှငျ၊ နညျးပညာနှငျ့ သကျမှေးပညာကြှမျးကငျြသူမြားကို အဆငျ့အလိုကျ မှေးထုတျရေး။
(၅) နိုငျငံတကာ ပညာရေးအဆငျ့ ရှိစရေေးအတှကျ ခတျေမီနညျးပညာမြားကို အသုံးပွုဆောငျရှကျရေး။
(၆) အဆငျ့မွငျ့ပညာကြောငျးမြားတှငျ ဆရာသမဂ်ဂမြားနှငျ့ ကြောငျးသား သမဂ်ဂမြားကို သကျဆိုငျရာ တက်ကသိုလျ ပဋိညာဉျစာတမျးနှငျ့အညီ လှတျလပျစှာ ဖှဲ့စညျးတညျထောငျခှငျ့ရှိရေး။
(၇) တက်ကသိုလျနှငျ့ ကောလိပျမြားသညျ လှတျလပျသော ကိုယျပိုငျစီမံခနျ့ခှဲခှငျ့ဖွငျ့ ရပျတညျရေး။
(၈) ကိုယျပိုငျ (သို့မဟုတျ) ပုဂ်ဂလိကကြောငျးမြားကို သကျဆိုငျရာ ဥပဒနှေငျ့အညီ တညျထောငျခှငျ့ပွုခွငျးနှငျ့ ပညာရေးလုပျငနျးမြား၌ ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍ၏ ပူးပေါငျးပါဝငျ ဆောငျရှကျမှုကို အားပေးမွှငျ့တငျရေး။
(၉) ဉာဏျရညျဉာဏျသှေးထကျမွတျမှု (IQ) နှငျ့ စိတျရငျ့ကကျြတညျငွိမျမှု၊ တဈပါးသူကို စာနာပေးနိုငျမှု (EQ) စသညျ့ ၂၁ ရာစုကို စိနျချေါနိုငျသော ပညာရေးစနဈကို ဖျောဆောငျရေး။
(၁၀) အသကျမှေးဝမျးကြောငျးပညာရေးကို ဖျောထုတျရေး။
လူတိုငျးအရညျအသှေးပွညျ့ဝသော ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုမြားကို လကျလှမျးမီရရှိစရေေး (UNIVERSAL TEALTH COVERAGE) နှငျ့ ပွညျသူမြားအားလုံး ကနျြးမာသနျစှမျးရေး (NATIONAL FITNESS) အတှကျ ဦးတညျသညျ။
(၁) လူတိုငျးလကျလှမျးမီသညျ့ ကနျြးမာရေးလှမျးခွုံမှု ရရှိရေးအတှကျ အမြိုးသားကနျြးမာရေးလုပျငနျးမြားကို အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျရနျ။
(၂) ဘှဲ့ကွိုနှငျ့ ဘှဲ့လှနျသငျတနျးမြားကို တိုးခြဲ့ဖှငျ့လှဈသငျကွား၍ အရညျအသှေးပွညျ့ဝသော ကနျြးမာရေး လူ့စှမျးအားအရငျးအမွဈမြား ပိုမိုမှေးထုတျရနျ။
(၃) အရညျသှေး ပွညျ့ဝသော ဆရာဝနျမြား၊ သူနာပွု၊ သားဖှားနှငျ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားကို ပိုမိုမှေးထုတျရနျ၊ ဆေးတက်ကသိုလျမြား သငျကွားခွငျး သငျရိုးညှနျးတမျး (QUTCOME-BASED INTEGRATED CURRICULUM) ဖွငျ့ သငျကွားရနျ။
(၄) ပွညျသူမြားအား ပိုမိုအရညျအသှေးပွညျ့ဝသော ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှုမြား ပေးနိုငျရေးအတှကျ အသုံးခသြုတသေနမြား ဆောငျရှကျရာတှငျ ရနျပုံငှမြေား တိုးမွှငျ့ခထြားဆောငျရှကျရနျ။
(၅) ဆေးရုံမြားတှငျ လိုအပျသညျ့ အခွခေံဆေးဝါးမြားနှငျ့ ဆေးပညာကိရိယာမြား ပွညျ့စုံစရေေးအတှကျ ဆေးနှငျ့ ဆေးပစ်စညျးမြား ရနျပုံငှကေို တိုးမွှငျ့သုံးစှဲရနျ။
(၆) ပွညျသူမြား ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုကို ပိုမိုလကျလှမျးမီစရေေးအတှကျ ဆေးရုံမြား တိုးခြဲ့ဖှငျ့လှဈခွငျး၊ အဆငျ့မွှငျ့တငျခွငျး၊ ကြေးလကျကနျြးမာရေးဌာနနှငျ့ ဌာနခှဲအသဈမြား ဖှငျ့လှဈခွငျးနှငျ့ အမြိုးမြိုးသော ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြား အသဈခနျ့ထားခွငျးတို့ကို ဆောငျရှကျရနျ။
(၇) ကြောငျးသားလူငယျမြားတှငျ ကနျြးမာရေးနှငျ့ညီညှတျသော လူနမှေု ဘဝပုံစံ (HEALTHY LIFE STYLE) စှဲမွဲစှာကငျြ့သုံးလာစရေနျအတှကျ ကြောငျးကနျြးမာရေးလုပျငနျးမြား အရှိနျအဟုနျမွှငျ့ဆောငျရှကျရနျ။
(၈) အမြိုးသားအာဟာရဖှံ့ဖွိုးမှုဆိုငျရာ စီမံကိနျးရေးဆှဲ၍ အာဟာရဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးလုပျငနျးမြားကို အရှိနျအဟုနျမွှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရနျ။
(၉) မကူးစကျတတျသော ရောဂါမြားဖွဈသညျ့ ဆီးခြို၊ သှေးတိုး၊ နှလုံး၊ ကငျဆာ၊ အဆုတျရောဂါဖွဈပှားမှုနှုနျး ကဆြငျးရေးအတှကျ လကျတှကေ့ပြွီး ကငျြ့သုံးလုပျကိုငျနိုငျမညျ့ လုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျရနျ။
(၁၀) ပွညျသူမြား၏ ကနျြးမာရေးအသိပညာ စာတတျမွောကျမှု (HEALTH LITERACY) မွငျ့မားလာစပွေီး ကနျြးမာရေးနှငျ့ညီညှတျသော အပွုအမူမြား ဖွဈထှနျးလာစရေေးအတှကျ MOBILE TABLET ဖုနျးမြားအသုံးပွု ခွငျးအပါအဝငျ နညျးလမျးပေါငျးစုံဖွငျ့ အသိပညာပေးခွငျး လုပျငနျးမြားကို အလေးပေးဆောငျရှကျရနျ။
(၁၁) အရညျအသှေးပွညျ့ဝသော တိုငျးရငျးဆေးပညာရှငျမြား ပိုမိုမှေးထုတျရေးနှငျ့ တိုငျးရငျးဆေးသုတသေနကို ပိုမိုပွုလုပျရနျ။
(၁၂) ပုဂ်ဂလိက ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု လုပျငနျးမြား အရညျအသှေးပွညျ့မီစရေေးနှငျ့ ပိုမိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာစရေေးအတှကျ ဆောငျရှကျရနျ။
နိုငျငံတျော၏ သဘာဝသယံဇာတ အရငျးအမွဈမြားဖွဈသညျ့ သဈတောသယံဇာတ၊ သတ်တုသယံဇာတ၊ ကောငျးမှနျသော သဘာဝပတျဝနျးကငျြနှငျ့ ဂဟေစနဈဝနျဆောငျမှုစနဈမြားကို နိုငျငံတျောနှငျ့ နိုငျငံသားမြားအားလုံးအတှကျ အကြိုးအရှိဆုံးဖွဈအောငျ စနဈတကြ စီမံကှပျကဲရနျ ဖွဈပါသညျ။
(၁) နိုငျငံတျော၏ သဘာဝသယံဇာတ အရငျးအမွဈမြားကို ကာကှယျထိနျးသိမျးရနျ။
(၂) သားစဉျမွေးဆကျ လကျဆငျ့ကမျးနိုငျရေးအတှကျ ရရှေညျတညျတံ့စသေော နညျးလမျးဖွငျ့ နိုငျငံတျော၏ သဘာဝသယံဇာတ အရငျးအမွဈမြားကို ထုတျယူသုံးစှဲရနျ။
(၃) ပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးကာကှယျရေး၊ ထိခိုကျပကျြစီးမှုမြား တတျနိုငျသမြှ လြော့နညျးသကျသာရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု လုပျငနျးမြားကို ဟနျခကျြညီညီ သဟဇာတဖွဈစရေနျ။
(၄) ကာကှယျခွငျး၊ ထာဝစဉျတညျတံ့စခွေငျး၊ အခွခေံ စားဝတျနရေေးလိုအပျခကျြမြား ဖွညျ့ဆညျးပေးခွငျး၊ စှမျးဆောငျရညျတိုးတကျမွငျ့မားလာစခွေငျး၊ နိုးကွားတကျကွှသညျ့အသိ ရှငျသနျနစေခွေငျး စသညျတို့အပျေါ အခွခေံ၍ အမြိုးသားသဈတောကဏ်ဍကို အကောငျအထညျဖျောရနျ။
(၅) ဒသေခံပွညျသူမြား၏ အခွခေံလိုအပျခကျြမြားဖွဈသညျ့ ထငျး၊ တိုငျ၊ မြော၊ ဝါး စသညျတို့ဖွညျ့ဆညျးနိုငျရေး ဒသေခံပွညျသူအစုအဖှဲ့ပိုငျ သဈတောလုပျငနျး (COMMUNITY FORESTYR) ကို ခှငျ့ပွုပေးရနျ။
(၆) မွနျမာနိုငျ သဈတောမြား ပွနျလညျတညျထောငျရေး စီမံကိနျး (MYANMAR REFORESTATION AND REHABILITATION PROGRAMME – MRRP) ကို ရေးဆှဲပွီး သဈတောစိုကျခငျး တညျထောငျခွငျး၊ သဈတောပွုစုထိနျးသိမျးခွငျး လုပျငနျးမြားကို အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျရနျ။
(၇) အပူပိုငျးဒသေ စိမျးလနျးစိုပွရေေးအတှကျ သဈတောစိုကျခငျးမြား တညျထောငျခွငျး၊ သဘာဝတောကနျြမြား ထိနျးသိမျးကာကှယျခွငျး၊ ထငျးအစား အခွားလောငျစာ တိုးမွှငျ့သုံးစှဲရေး ဆောငျရှကျခွငျးတို့ကို ဆောငျရှကျရနျ။
(၈) ပွညျသူလူထု၏ လူနမှေုဘဝ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ ကနျြးမာပြျောရှငျရေးအတှကျ သနျ့ရှငျးသော ပတျဝနျးကငျြနှငျ့ ကောငျးမှနျသော ဂဟေစနဈကို ထိနျးသိမျးနိုငျရနျ။
(၉) ဓာတျသတ်တု၊ ကြောကျမကျြနှငျ့ ပုလဲအရငျးအမွဈမြားကို ခတျေမီနညျးစနဈ၊ ကောငျးမှနျသော စီမံခနျ့ခှဲမှု စနဈတို့ဖွငျ့ သငျ့တငျ့စှာ ထုတျယူသုံးစှဲရနျ၊ တိုးခြဲ့ရှာဖှရေနျ။
(၁၀) ဓာတျသတ်တုလုပျငနျးမြားကွောငျ့ ပတျဝနျးကငျြထိခိုကျမှု အနညျးဆုံးဖွဈစရေနျနှငျ့ လုပျငနျးခှငျ့ ဘေးအန်တရာယျမှ ကငျးရှငျးကွစရေနျ။
(၁၁) ဓာတျသတ်တု အသေးစား၊ လကျလုပျလကျစား တူးဖျောမှုမျြားကို စနဈတကြ ဆောငျရှကျစခွေငျးဖွငျ့ တရားမဝငျတူးဖျောမှုမြား လြော့နညျးပပြောကျစရေနျ။
(၁၂) ပွောငျးလဲနသေညျ့ ရာသီဥတုနှငျ့ ဆိုးရှားလာသော သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျမြားကို ရငျဆိုငျတုံ့ပွနျကာ လိုကျလြောညီထှေ ရှငျသနျရပျတညျ၍ ပွနျလညျထူထောငျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျစှမျးရှိသညျ့ လူ့ဘောငျအဖှဲ့အစညျး (RESILIENT SOCIETY ADAPTIVE TO CLIMATE CHANGE AND NATURAL DISASTER) တညျဆောကျခွငျးဆိုငျရာ နညျးလမျးမြားဖွငျ့ ဆောငျရှကျရနျ။
လြှပျစဈဓာတျအားသညျ နိုငျငံ၏ စကျမှုထုတျကုနျ တိုးမွှငျ့ထုတျလုပျရေးနှငျ့ စကျမှုဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျ အလှနျအရေးကွီး သညျ။ နိုငျငံတှငျ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘကျစုံဖှံ့ဖွိုးလာသညျနှငျ့အမြှ စှမျးအငျလိုအပျခကျြ သညျလညျး အရှိနျအဟုနျဖွငျ့ တိုးမွငျ့လာမညျဖွဈပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ လြှပျစဈနှငျ့ စှမျးအငျကဏ်ဍ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာအောငျ အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျမညျ။
(၁) လြှပျစဈဓာတျအား လုံလောကျပွညျ့ဝစှာ ဖွနျ့ဖွူးပေးနိုငျရေးအတှကျ ရအေား၊ လအေား၊ နအေား၊ အပူစှမျးအငျ (GAS, COAL, LNG)နှငျ့ အခွားစှမျးအငျအရငျးအမွဈမြား အသုံးပွု၍ လြှပျစဈဓာတျအား ထုတျလုပျနိုငျရေး။
(၂) နိုငျငံတျောတှငျ လကျရှိ လြှပျစဈလိုအပျခကျြကို ဖွညျ့ဆညျးရနျနှငျ့ အနာဂတျ စှမျးအငျလိုလောကျမှုရှိပွီး အရနျစှမျးအငျ ထားရှိရေး။
(၃) အရညျအသှေး ကောငျးမှနျသော လြှပျစဈဓာတျအားကို အန်တရာယျကငျးရှငျစှာ ပို့လှတျဖွနျ့ဖွူးပေးနိုငျရေး။
(၄) လြှပျစဈဓာတျအား ထုတျလုပျ၊ ပို့လှတျ၊ ဖွနျ့ဖွူးမှုလုပျငနျးမြားကို သဘာဝပတျဝနျးကငျြသကျရောကျမှု (EIA) နှငျ့ လူမှုပတျဝနျးကငျြ သကျရောကျမှု (SIA) နညျးလမျးမြားအရ ဆောငျရှကျရေး။
(၅) ပွညျတှငျး၌ရှိသော ရနေံနှငျ့ သဘာဝဓာတျငှမြေ့ားကို ပိုမိုရှာဖှထေုတျလုပျရေး။
(၆) ပွညျတှငျးမှ ထှကျရှိသညျ့ သဘာဝဓာတျငှမြေ့ားကို ပွညျတှငျးလိုအပျခကျြအတှကျ ဦးစားပေးသုံးစှဲပွီး ပိုလြှံသော သဘာဝဓာတျငှကေို့ ပွညျပသို့ ရောငျးခရြေး။
ပွညျသူလူထု၏ လူမှုစီးပှားဘဝမြား မွငျ့မားလာစရေေးနှငျ့ နိုငျငံတျော၏ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာစေ ရေးတို့အတှကျ ပိုမိုကောငျးမှနျသော ပို့ဆောငျရေးစနဈဖွဈလာရနျ ဆောငျရှကျမညျ။
(၁) သဘာဝပတျဝနျးကငျြနှငျ့ လိုကျလြောညီထှရှေိသညျ့ ဘေးကငျးလုံခွုံသော သယျယူပို့ဆောငျရေးဆိုငျရာ အခွခေံအဆောကျအအုံမြားကို ဖွညျ့ဆညျးအဆငျ့မွှငျ့တငျ တညျဆောကျရနျ။
(၂) ပို့ဆောငျရေးကဏ်ဍမြားအကွား လှတျလပျစှာယှဉျပွိုငျနိုငျမှုနှငျ့ ပေါငျးစပျခြိတျဆကျ ဆောငျရှကျနိုငျမှုကို ထိထိရောကျရောကျ ထောကျပံ့ဖွညျ့ဆညျးနိုငျသော သယျယူပို့ဆောငျရေးဝနျးကငျြတဈခု ဖွဈပျေါလာစရေနျ။
(၃) နိုငျငံပိုငျ၊ ပုဂ်ဂလိကနှငျ့ အစိုးရ-ပုဂ်ဂလိက ပူးပေါငျးမှုအစီအစဉျမြားဖွငျ့ ပို့ဆောငျရေးကဏ်ဍမြားတှငျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြား ပိုမိုတိုးတကျလာစရေေး အားပေးမွှငျတငျရနျ။
(၄) နိုငျငံ၏ ပို့ဆောငျရေး အရငျးအရမွဈမြားကို အရညျအသှေးမွှငျ့တငျပေးရနျ။
(၅) ငှကွေေးအကြိုးအမွတျ မရှိသျောလညျး ပွညျသူလူထု၏ လူမှုဘဝဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစမေညျ့ ပို့ဆောငျရေး လုပျငနျးမြားကို ထောကျပံ့ဖွညျ့ဆညျးပေးရနျ။
ဆကျသှယျရေးနညျးပညာမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာသညျ့ ဂလိုဘယျလိုကျဇေးရှငျးခတျေကွီးတှငျ နိုငျငံတျော၏ ဆကျသှယျရေးအခနျးကဏ်ဍ ပိုမိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာစရေနျ ဆောငျရှကျမညျ။
(၁) လုံခွုံစိတျခရြပွီး ဝနျဆောငျမှု အရညျအသှေး မွငျ့မား၍ ဈေးကှကျယှဉျပွိုငျမှုရှိသညျ့ အိုငျစီတီကဏ်ဍ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာစရေနျ။
(၂) အစိုးရအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ပွညျသူလူထုအကွား ဆကျသှယျဆောငျရှကျမှု ပိုမိုကောငျးမှနျလာစရေနျ အီလကျထရောနဈ အစိုးရလုပျငနျးစဉျမြား အကောငျအထညျဖျောနိုငျရေး တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရနျ။
(၃) ကြေးလကျနှငျ့ မွို့ပွဒသေမြားအကွား ဒဈဂဈြတယျကှာဟမှု လြော့နညျးစရေေးအတှကျ အခွခေံ ဆကျသှယျရေးဝနျဆောငျမှုမြားအား မွနျမာနိုငျငံတဈဝနျး အခြိနျမရှေး၊ နရောဒသေမရှေး ဖွနျ့ကကျြရရှိပွီး နိုငျငံတကာအဆငျ့မီ ဆကျသှယျရေး ဆောငျရှကျရနျ။
(၄) ဆကျသှယျရေးနှငျ့ သတငျးအခကျြအလကျ တညျငွိမျစှာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာစရေနျ။
(၅) အမြားပွညျသူအကြိုးပွု အိုငျစီတီနညျးပညာရပျမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာစရေေးနှငျ့ တီထှငျဖနျတီးနိုငျမှု မွငျ့မားလာစရေေးအတှကျ သုတသေနလုပျငနျးမြား ထှနျးကားလာစရေေး တှနျးအားပေးဆောငျရှကျရနျ။
(၆) ဒဈဂကျြတယျ ငှရေေးကွေးရေး ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးမြား အပါအဝငျ ဒဈဂဈြတယျ စီးပှားရေးကဏ်ဍ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ပံ့ပိုးဆောငျရှကျရနျ။
(၇) ဆိုကျဘာလုံခွုံရေးဆိုငျရာ နိုငျငံတျောနှငျ့ နိုငျငံသားတို့၏ ဒဈဂဈြတယျအခြုပျအခွာအာဏာ၊ အကြိုးစီးပှားနှငျ့ ပုဂ်ဂိုလျရေးဆိုငျရာ အခကျြအလကျ လုံခွုံမှုမြားကို အကာအကှယျပေးနိုငျရေး ဆောငျရှကျရနျ။
(၈) အပွညျပွညျဆိုငျရာ ကွေးနနျးဆကျသှယျရေးအဖှဲ့ခြုပျ၊ ကမ်ဘာ့စာပို့တိုကျသမဂ်ဂ အပါအဝငျ နိုငျငံတကာ အဖှဲ့အစညျးမြား၊ ဒသေတှငျး အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးလကျတှဲ၍ စာပို့တိုကျနှငျ့ ဆကျသှယျရေးဝနျဆောငျမှု လုပျငနျးမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျအောငျ ဆောငျရှကျပွီး ပွညျသူလူထုအတှကျ အရညျအသှေး ပိုမိုကောငျးမှနျသော ဝနျဆောငျမှုမြား ရရှိနိုငျစရေေး ဆောငျရှကျရနျ။
(၉) IT တိုးတကျမှု၏ ကောငျးကြိုး၊ ဆိုးကြိုး၊ အကြိုးနှဈသှယျကို မြှတစှာ သုံးသပျနိုငျရေး။
(၁၀) COVID အတှအေ့ကွုံမြား သငျခနျးစာယူပွီး ခတျေမီနညျးပညာမြားသုံး၍ နိုငျငံယန်တရား လညျပတျနိုငျရေး။
(၁) တောငျသူလယျသမားမြား လှတျလပျစှာ စိုကျပြိုး၊ ထုတျလုပျ၊ သိုလှောငျ၊ ကွိတျခှဲ၊ သယျယူ၊ ပို့ဆောငျရောငျးခခြှငျ့ ရှရှိရေး။
(၂) ဥပဒနှေငျ့ညီညှတျမှုမရှိသော လယျယာမွေ သိမျးဆညျးခံရမှုမြားမဖွဈပျေါစရေေး။
(၃) ဥပဒမေဲ့ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော လယျယာမွမြေားအား ဥပဒနှေငျ့အညီ ပွနျလညျစိစဈပွီး လယျယာမွေ ပွနျလညျရရှိရေး၊ လြျောကွေးနဈနာကွေးရရှိရေး။
(၄) တောငျသူလယျသမားမြား၏ လူမှုစီးပှားဘဝ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ကြေးရှာခငျြးဆကျလမျးနှငျ့ ကုနျထုတျလမျးတံတားမြား ပိုမိုဖောကျလုပျတညျဆောကျရေး။
(၅) လှတျလပျသညျ့ တောငျသူလယျသမား အဖှဲ့အစညျးမြား ပျေါပေါကျရေး။
(၆) စိုကျပြိုးရေးထှကျကုနျ ကုနျကွမျးအဆငျ့မှ တနျဖိုးမွငျ့ စကျမှုကုနျခြောထှကျကုနျမြားဖွဈစရေနျ နညျးပညာမြား ဖွနျ့ဝခွေငျးနှငျ့ လိုအပျသော ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြား ထုတျခြေးပေးခွငျးတို့ကို အထူးအားပေးရေး။
(၇) လယျယာကဏ်ဍ ထုတျလုပျမှု တိုးတကျစရေနျ လိုအပျသညျ့ ငှကွေေး၊ အရငျးအနှီး၊ နညျးပညာနှငျ့ သှငျးအားစုမြား၊ ရှရိစရေေး။
(၈) ဆနျစပါးအပါအဝငျ အလားအာလရှိသော အရညျအသှေးမွငျ့ ပွညျပပို့ကုနျသီးနှံမြား တိုးခြဲ့စိုကျပြိုးထုတျလုပျရေးနှငျ့ ပွညျပဈေးကှကျတှငျ ထုတျလုပျမှုအရေးအတှကျ၊ ထုတျကုနျအရညျအသှေး နှငျ့ ဈေးနှုနျးအရ နိုငျငံတကာနှငျ့ ယှဉျပွိုငျနိုငျစှမျးရှိရေး။
(၉) တောငျသူလယျသမားမြားနှငျ့ စိုကျပြိုးရေးလုပျငနျးရှငျမြား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသော အကြိုးတူ ကနျထရိုကျလယျယာစနဈ ပီပွငျစှာဖွဈပျေါရေး။
(၁၀) စကျမှုလယျယာစနဈကို အလားအလာကောငျးသော ဒသေမြား၌ တိုးခြဲ့ဆောငျရှကျရေး
(၁၁) လုပျကှကျငယျတောငျသူမြား လယျယာလုပျငနျးပွငျပ ဝငျငှရေရှိရေးကို လေးပေးဆောငျရှကျရေး။
(၁၂) တောငျသူမြားအနဖွေငျ့ သကျဆိုငျရာ ဥပဒပေါ အခှငျ့အရေးမြားကို အခြိနျနှငျ့တပွေးညီ အပွညျ့အဝ ရှရိစရေေးအတှကျ အလေးပေးဆောငျရှကျရေး။
(၁၃) တောငျသူလယျသမားမြား စိုကျပြိုးရေးဆိုငျရာ အလအေ့ကငျြ့ကောငျးမြားကို ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ လိုကျနာဆောငျရှကျရေး။
(၁၄) တောငျသူလယျသမားမြား လှတျလပျစှာ စိုကျပြိုးထုတျလုပျရောငျးခရြေး။
(၁၅) စိုကျပြိုးရေးထုတျကုနျမြား သိုလှောငျမှု၊ ကွိတျခှဲမှု၊ ဈေးကှကျရှရိမှုတို့ကို တိုးတကျကောငျးမှနျစရေေး။
(၁၆) စိုကျပြိုးရေးထှကျကုနျမြား ကုနျကွမျးအဆငျ့မှ တနျဖိုးမွငျ့ စကျမှုကုနျခြောထှကျကုနျမြား ဖွဈလာစရေနျ နညျးပညာမြား ဖွနျ့ဝခွေငျး၊ သှငျးအားစုမြားရရှိစရေေး လိုအပျသညျ့ ငှကွေေးနှငျ့ အရငျးအနှီးမြား ရှရိစရေေးတို့ကို တှနျးအားပေးဆောငျရှကျရေး။
(၁) နိုငျငံတျော ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ လုပျသားအငျအားကို စနဈတကနြှငျ့ အကြိုးရှိစှာ အသုံးခနြိုငျရေး။
(၂) စှမျးဆောငျရညျ ထကျမွတျသညျ့ ကြှမျးကငျြလုပျသားမြား စဉျဆကျမပွတျ ပျေါထှနျးလာစရေေး။
(၃) အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးမြား ပိုမိုဖနျတီးနိုငျခွငျးဖွငျ့ မသနျစှမျးမြား အပါအဝငျ မွနျမာအလုပျသမား ထု၏ လူမှုစီးပှားဘဝကို ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစရေေး။
(၄) အလုပျသမားမြားအတှကျ လုပျငနျးခှငျ့ အေးခမျြးသာယာ၍ ဘေးအန်တရာယျကငျးရှငျးပွီး ကနျြးမာရေးနှငျ့ ညီညှတျသငျ့တျောကောငျးမှနျသော လုပျငနျးခှငျ့မြားကို ဖနျတီးပေးရေး။
(၅) အလုပျသမားမြားအတှကျ အမှနျတကယျအကြိုးဖွဈထှနျးစမေညျ့ လူမှုဖူလုံရေးစီမံကိနျးမြားကို ခမြှတျအကောငျအထညျဖျောရေး။
(၆) အပွညျပွညျဆိုငျရာနှငျ့ ဒသေဆိုငျရာ အလုပျသမားရေးရာကိစ်စရပျမြားအတှကျ ပွညျတှငျး/ပွညျပအဖှဲ့ အစညျးမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး။
(၇) ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြား အရေးကိစ်စတှငျ နိုငျငံတကာအဖှဲ့အစညျးမြား၊ ပွညျတှငျး/ပွညျပရှိ လူမှုအခွပွေုအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျစရေေး။
(၈) အလုပျရှငျနှငျ့ အလုပျသမားမြားကွား မိတျဖကျဆကျဆံရေးကောငျးမှနျပွီး ဥပဒနှေငျ့အညီ အလုပျသမားအခှငျ့အရေးမြား အပွညျ့အဝရရှိရေး။
(၁) ကုသမဂ်ဂက ခမြှတျထားသော စဉျဆကျမပွဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျမှုရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျ (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL – SDG) မြား၊ အမြိုးသမီးမြားအား နညျးမြိုးစုံဖွငျ့ ခှဲခွားမှုပပြောကျရေးဆိုငျရာ ကုလသမဂ်ဂကှနျဗနျးရှငျး (UNITED NATIONS COVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATIN AGAINTS WOMEN – UNCEDAW) ပါ ပွဌာနျးခကျြမြား၊ လုပျငနျးအစီအစဉျမြားကို နိုငျငံတျော၏ မူဝါဒနှငျ့အညီ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျရနျ။
(၂) အမြိုးသမီးမြားသညျ နိုငျငံရေး၊ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေးကဏ်ဍအသီးသီးတှငျ အမြိုးသားမြားနှငျ့ တနျးတူအခှငျ့အရေး ရရှိစရေေးအတှကျ ပွဌာနျးထားသော ဥပဒမြေား ထိရောကျရှိစရေနျနှငျ့ လိုအပျသော ဥပဒမြေား ရေးဆှဲပွဌာနျး ဆောငျရှကျရနျ။
(၃) အမြိုးသမီးမြားအပျေါ နညျးမြိုးစုံဖွငျ့ အကွမျးဖကျမှုမှ ကွိုတငျကာကှယျရနျ၊ စောငျ့ရှောကျမှုမြားပေးရနျနှငျ့ ဥပဒနှေငျ့အညီ အရေးယူဆောငျရှကျရနျ။
(၄) အမြိုးသမီးမြားအား မိမိတို့ကို ကာကှယျပေးထားသော ဥပဒမြေားနညျးလညျလာစရေနျနှငျ့ ဗဟုသုတမြား ပွညျ့စုံစရေေးအတှကျ ဆောငျရှကျပေးရနျ။
(၅) ကိုယျဝနျဆောငျကာလနှငျ့ မီးဖှားကာလမြားအတှငျး အမြိုးသမီးမြားသညျ ဥပဒနှေငျ့အညီ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု ရရှိခံစားစရေနျ။
ကနျြးမာကွံ့ခိုငျရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စှမျးရညျ၊ လူ့ကငျြ့ဝတျ၊ လူ့တနျဖိုးနှငျ့ ဦးဆောငျမှုအရညျအသှေး၊ ပူးပေါငျးပါဝငျ ဆောငျရှကျရေးစသညျတို့တှငျ သာတူညီမြှ ဘကျစုံဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျသော လူငယျမြားအဖွဈ ပြိုးထောငျပေးပွီး နိုငျငံ့သားကောငျးလူငယျမြား ပျေါထှနျးလာရနျ ရညျမှနျးထားပါသညျ။
(၁) လူငယျတို့၏ ရုပျပိုငျး၊ စိတျပိုငျး၊ နိုငျငံရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပှားရေးဆိုငျရာ လိုအပျခကျြမြားကို ဖွညျ့ဆညျးရနျ။
(၂) ဥပဒပွေုရေး၊ အုပျခြုပျရေး စသညျ့ကဏ်ဍတို့တှငျ အရညျအခငျြးပွညျ့မီသော လူငယျမြား ပါဝငျနိုငျမညျ့ အနအေထားကို ဖျောဆောငျပေးရနျ။
(၃) လူငယျမြားတှငျ ကြား/မ လိငျစိတျကိုငျးညှတျမှုနှငျ့ လိငျဝိသသေ ခံယူမှုအရသျောလညျးကောငျး၊ ရိုးရာ ယဉျကြေးမှုအရသျောလညျးကောငျး၊ ယုံကွညျကိုးကိုယျမှု ဘာသာအရလညျးကောငျး၊ မသနျစှမျးမှုအရသျော လညျးကောငျး၊ ရုပျပိုငျးနှငျ့ စိတျပိုငျးဆငျရာ အခွအေနအေရလညျးကောငျး စသညျ့ခှဲခွားဆကျဆံမှုမြား ကငျးရှငျးရနျ။
(၄) လူငယျမြား၏ တီထှငျဆနျးသဈ ဖနျတီးနိုငျစှမျးမြားကို မွှငျ့တငျအားပေးရနျ။
(၅) လူငယျမြားအတှကျ အာမခံခကျြရှိသော အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ပညာရေးစနဈ ပျေါပေါကျလာစရေနျ။
(၆) လူငယျအသငျးအဖှဲ့မြား ပျေါပေါကျလာစရေနျနှငျ့ လူငယျစငျတာမြား ဖှငျ့လှဈနိုငျရနျ။
(၇) တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျအလိုကျနှငျ့ လူမြိုးစုအလိုကျအထိ မတူကှဲပွားသော လူငယျမြား သာတူညီမြှ ဖှံ့ဖွိုးနိုငျမှုအတှကျ အခွခေံကောငျးမြားရှိရနျ။
၁။ တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေဒ
၂။ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်ထွန်းစေမည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပေါ်ပေါက်ရေး
၃။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမည့် လုံခြုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေး၊ ပြည်သူလူထုအကျိုးပြုရေးတို့ကို ရှေးရှုပြီး ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလနှင့် ဆီလျော်စေရန် တည်ဆဲဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အသစ်ပြဌာန်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်မည်။
(က) ခေတ်စနစ်နှင့်ညီညွတ်သော ဥပဒေများဖြစ်စေရန်။
(ခ) ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ညီညွတ်မှုရှိစေရန်။
(ဂ) လူ့အခွင့်အရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ညီညွတ်မှုရှိစေရန်။
(ဃ) ပြည်သူလူထုအပေါ် ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်သော ဥပဒေမျိုး မဖြစ်စေရန်။
(င) နိုင်ငံတကာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ဆီးလျော်စေရန်။
(စ) ပြည်သူများအကြား သဟဇာတဖြစ်ရေး၊ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးကို မြှင့်တင်နိုင်စေရန်။
ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရန် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေး မရှိမဖြစ်လိုအပ် သည်။ ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ထွန်းစေရန် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိ စေမည့် အုပ်ချုပ်ရေးမူဘောင်များကို ချမှတ်ရပါမည်။
(က) စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝပြီး အဂတိကင်းသော အစိုးရတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်။
(ခ) တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ တန်းတူညီမျှမှု ထွန်းကားစေရန်။
(ဂ) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အထောက်အကူဖြစ်ရန်။
(ဃ) ပြည်သူလူထု၏ စိတ်လုံခြုံမှုနှင့် ကိုယ်လုံခြုံမှုကို တရားမျှတစွာ အကာအကွယ်ပေးရန်။
(င) ဥပဒေအရာတွင် အားလုံးအညီအမျှဖြစ်သည်ဟူသော မူအရ တရားနည်းလမ်းတကျ မျှမျှတတဖြစ်စေရန်။
(စ) ပြည်သူလူထုအားဖိနှိပ်သည့် ကိရိယာမဖြစ်စေဘဲ ပြည်သူလူထုအကျိုးကို ကာကွယ်ပေးသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုယန္တရားဖြစ်စေရန်။
(ဆ) ပြည်သူလူထုအပေါ်တွင် စိတ်ရင်းစေတနာမှန်ဖြင့် ဝန်တောင်မှုပေးရန်။
တရားမျှတပြီး ဘက်လိုက်မှုကင်းသည့် တရားစီရင်ရေးစနစ်ကို ထူထောင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်။
(က) ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် နိုင်ငံတော်၏ အမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်သည်။
(ခ) နိုင်ငံတော်၏ တရားစီရင်ရေးအာဏာကို တရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တရား လွှတ်တော်များနှင့် အဆင့်ဆင့်သော တရားရုံးများအား ခွဲဝေအပ်နှင်းသည်။
(ဂ) ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာတရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေအရကန့်သတ်ချက်မှအပ ပြည်သူ့ရှေ့မှောက်တွင် တရားစီရင်ရေး၊ အမှုများတွင် ဥပဒေအရ ခုခံချေပခွင့်နှင့် အယူခံပိုင်ခွင့်ရှရိရေးတို့သည် တရားစီရင်ရေးမူများဖြစ်သည်။
(ဃ) မည်သူ့ကိုမဆို ဥပဒေအရ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း မရှိသေးသမျှ အပြစ်ကင်းသည်ဟု မှတ်ယူရေး၊ ထင်ကြေးဖြင့် အပြစ်မပေးရေး၊ သံသယအကျိုးကို တရားခံအား ခံစားခွင့်ပေးရေးတို့ကို တရားစီရင်ရေး၏ စံများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
(င) ပြည်သူလူထုအတွက် တရားမျှတပြီး ဘက်လိုက်မှုကင်းသည့် တရားစီရင်ရေးစနစ်ကို ထူထောင်မည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (msdp)တို့နှင့်အညီ ဖြစ်စေရန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဆောင်ရွက်မည်။
(၁) တန်းတူညီမျှသော နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိပြီး ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည်ထေင်စုတည်ဆောက်ရေး။
(၂) တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ချစ်ကြည်လေးစားရေးနှင့် ရိုင်းပင်းကူညီရေးတို့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းရေး။
(၃) ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ၏ အရင်းအမြစ်များကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိသော နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများဖြင့် ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေး၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးရှရိရေး။
(၄) ပြည်ထောင်စုကြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အတွက် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်အခြေခံ၍ ထာဝစဉ်လက်တွဲနေတိုင်ရေး။
(၅) တိုင်းရင်းသားများ၏ စကား၊ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်း၊ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာနှင့် သမိုင်းအမွေအနှစ်တို့ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။
(၆) ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအားလုံ ဟန်ချက်ညီညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး။
(၇) သဘာဝ အရင်းအမြစ်များမှ ရရှိလာသည့် အကျိုးအမြတ်များကို ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမူနှင့်အတူ ဒေသအလိုက် မျှတစွာခွဲဝေခံစားခွင့်ရရှိရေး။
(၁) နိုင်ငံတကာနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင် လွတ်လပ်၍ တက်ကြွသည့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို ကျင့်သုံး၍ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည်။ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံအချင်းချင်း မိတ်ဝတ်မပျက် ဆက်ဆံရေးကို ရှေးရှုမည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးမူကို စောင့်ထိန်းမည်။
(၂) နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်ဆံရာ၌ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကိစ္စရပ်များတွင် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများကို အခြေခံ၍ လူသားများအကြား သဟဇာတဖြစ်ရေးကို မြှင့်တင်သည့်မူအပေါ် ခိုင်မာစွာရပ်တည်မည်။
(၃) ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြးရန်ပုံငွေအဖွဲ့စသည်တို့နှင့် ရင်းနှီးခင်မင်စွာ ဆက်ဆံမည်။
(၁) တပ်မတော်၏ အဓိကတာဝန်အဖြစ် နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများကို ကာကွယ်ရန်။
(၂) ပြည်သူတို့ ယုံကြည်အားကိုးသော တပ်မတော်ဖြစ်ရန်။
(၃) တပ်မတော်သည် ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းစံထားများနှင့်အညီ ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော အစိုးရ၏ မူဝါဒအပေါ်ရပ်တည်ရန်။
(၄) စစ်ရေးစွမ်းရည်ထက်မြတ်၍ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ခေတ်မီသည့် တပ်မတော်ဖြစ်ရန်။
(၅) ပြည်သူတို့ ချစ်ခင်အားကိုးသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ရန်။
(၆) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သော ရဲတပ်ဖွဲဖြစ်ရန်။
(၇) ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများကို အခြခံသည့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော လူမှုအသိုင်းအဝန်း ထွန်းကားရေး ပံ့ပိုးရန်။
(၈) အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် ခေတ်မီတိုးတက်သော ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ရန်။
(၁) ရေရှည်အမြော်အမြင်ဖြင့် ဆန်းသစ်တီထွင်သော ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။
(၂) ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးကဏ္ဍကို အားပေးခြင်းနှင့် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လူသားအရင်းအမြစ်များ တိုးတက်လာစေရေး။
(၃) အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အားပေးမြှင့်တင်ရေး။
(၄) တာဝန်ယူမှုရှိပြီး အရည်အသွးပြည့်ဝသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုဝင်ရောက်လာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးနိုင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ခွင့်ပြုပေးရေး။
(၅) နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွားကိုဖော်ဆော်သည့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသော ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖိတ်ခေါ်ဆောင်ရွက်ရေး။
(၆) covide-19 ကြောင့် စီးပွားရေးထိခိုက်မှုများ လျော့ပါးသက်သာလာစေရေးနှင့် နိုင်ငံစီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့လာစေရေး။
(၇) ဈေးကွက်တစ်ခုတည်းကို မူတည်နေမည့်အစား အခြားနိုင်ငံများသို့လည်း ဈေးကွက်ပိုမိုချဲ့ထွင်ရေး။
(၈) ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးစနစ်ဖြင့် နိုင်ငံစီးပွားရေး တိုးတက်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပြီး အခြားနိုင်ငံများသုိ့ ဈေးကွက်များ ချဲ့ထွင်ရေး။
(၁) လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူလယ်သမားများနှင့် လယ်မဲ့ယာမဲ့များအတွက် မြေယာသစ်များဖော်ထုတ်ပြီး မြေယာလုပ်ပိုင်ခွင့်များရရှိရန် ဆောင်ရွက်ပေးရေး။
(၂) ပြည်သူလူထု စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အာဟာရဖူလုံမှုရရှိရေးနှင့် လုပ်ကွက်ငယ် တောင်သူလယ်သမားများ အနေဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်စမ်းအား မြင့်မားလာစေပြီး ဝင်ငွေမြင့်မားလာစေရေး.
(၃) မြန်မာ့ရေးမြေသဘာဝနှင့် ကိုက်ညီပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ ပိုမိုသုံးစွဲနိုင်ရေး။
(၄) ရေချိုရေငန် ငါးဖမ်းဆီးလုပ်ကိုင်မှုများ ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြစ်စေရေး။
(၅) ပင်လယ်ကမ်းနီးကမ်းဝေးငါးများ မပြုန်းတီးရေးနှင့် ငါးခိုးဖမ်းမှုများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ကာကွယ်တားဆီးရေး။
(၆) လယ်ယာသားငါး ထုတ်ကုန်များ တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအထူးဇုန်များ တည်ထောင်ရေး။
(၇) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်သည့် ငွေကြေး အရင်းအနှီး၊ ချေးငွေအထောက်အပံ့၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် သွင်းအားစုများ ရှရိရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရေး။
(၈) နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းမီ မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေးနှင့် အခြား စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ရောဂါကာကွယ်ဆေးများ၊ ဆေးဝါးများ စနစ်တကျသုံးစွဲနိုင်ရေး။
(၉) မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မျိုးစေ့သွင်းအားစုများ ရှရိရေး။
(၁၀) ဒေသမျိုးစိတ်များဖော်ထုတ်ပြီး တရားဝင်ဖြစ်စေရေး။
(၁၁) စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသော ခေတ်မီစက်မှုလယ်ယာစနစ်ကို တစ်ဆင့်ချင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရန် အားပေးကူညီရေး။
(၁၂) သဘာဝမြေသြဇာများ ပိုမိုသုံးစွဲနိုင်ရေး၊ သြဂဲနစ်မြေသြဇာများ ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှု တိုးတက်လာစေရေးနှင့် သြဂဲနစ်နည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ကူညီအားပေးရေး။
(၁၃) အမယ်စုံသီးနှံများ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဈေးကွက်သစ်များရရှိရေး။
နိုင်ငံသားတိုင်း မွေးဖွားချိန်မှ အစပြုကာ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး စဉ်ဆက်မပြတ် သင်ယူနိုင်မည့် ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ ရရှိရန်နှင့် အကျိုးရှိသည့် ပညာရပ်များ တတ်မြောက်ကြရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည်။
(၁) အခမဲ့ မသင်မနေရ မူလတန်းပညာရေးကို ဦးတည်အကောင်အထည်ဖော်ရေး။
(၂) ကျောင်းနေအရွယ် လူငယ်အားလုံး ပညာသင်ယူခွင့် ရရှိရေးအတွက် ပညာရေး အထူးဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်များ အပါအဝင် လူတိုင်းအကျုံးဝင် ပညာရေးအစီအစဉ် ထားရှိရေး။
(၃) လူမှုစီးပွားဘဝတွင် လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သည့် ပညာရေး ဖြစ်ရေး။
(၄) ပညာရပ်နယ်ပယ်အားလုံးကို တစ်ပြေးညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး နိုင်တော်၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်၊ နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာကျွမ်းကျင်သူများကို အဆင့်အလိုက် မွေးထုတ်ရေး။
(၅) နိုင်ငံတကာ ပညာရေးအဆင့် ရှိစေရေးအတွက် ခေတ်မီနည်းပညာများကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်ရေး။
(၆) အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများတွင် ဆရာသမဂ္ဂများနှင့် ကျောင်းသား သမဂ္ဂများကို သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခွင့်ရှိရေး။
(၇) တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များသည် လွတ်လပ်သော ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ဖြင့် ရပ်တည်ရေး။
(၈) ကိုယ်ပိုင် (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ တည်ထောင်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် ပညာရေးလုပ်ငန်းများ၌ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှုကို အားပေးမြှင့်တင်ရေး။
(၉) ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးထက်မြတ်မှု (iq) နှင့် စိတ်ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်မှု၊ တစ်ပါးသူကို စာနာပေးနိုင်မှု (eQ) စသည့် ၂၁ ရာစုကို စိန်ခေါ်နိုင်သော ပညာရေးစနစ်ကို ဖော်ဆောင်ရေး။
(၁၀) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးကို ဖော်ထုတ်ရေး။
လူတိုင်းအရည်အသွေးပြည့်ဝသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို လက်လှမ်းမီရရှိစေရေး (Universal tealth coverage) နှင့် ပြည်သူများအားလုံး ကျန်းမာသန်စွမ်းရေး (national fitness) အတွက် ဦးတည်သည်။
(၁) လူတိုင်းလက်လှမ်းမီသည့် ကျန်းမာရေးလွှမ်းခြုံမှု ရရှိရေးအတွက် အမျိုးသားကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။
(၂) ဘွဲ့ကြိုနှင့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများကို တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သင်ကြား၍ အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ကျန်းမာရေး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ပိုမိုမွေးထုတ်ရန်။
(၃) အရည်သွေး ပြည့်ဝသော ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြု၊ သားဖွားနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို ပိုမိုမွေးထုတ်ရန်၊ ဆေးတက္ကသိုလ်များ သင်ကြားခြင်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်း (qutcome-based integrated curriculum) ဖြင့် သင်ကြားရန်။
(၄) ပြည်သူများအား ပိုမိုအရည်အသွေးပြည့်ဝသော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ပေးနိုင်ရေးအတွက် အသုံးချသုတေသနများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရန်ပုံငွေများ တိုးမြှင့်ချထားဆောင်ရွက်ရန်။
(၅) ဆေးရုံများတွင် လိုအပ်သည့် အခြေခံဆေးဝါးများနှင့် ဆေးပညာကိရိယာများ ပြည့်စုံစေရေးအတွက် ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ ရန်ပုံငွေကို တိုးမြှင့်သုံးစွဲရန်။
(၆) ပြည်သူများ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ပိုမိုလက်လှမ်းမီစေရေးအတွက် ဆေးရုံများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် ဌာနခွဲအသစ်များ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် အမျိုးမျိုးသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အသစ်ခန့်ထားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်။
(၇) ကျောင်းသားလူငယ်များတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော လူနေမှု ဘဝပုံစံ (healthy life style) စွဲမြဲစွာကျင့်သုံးလာစေရန်အတွက် ကျောင်းကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်။
(၈) အမျိုးသားအာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်းရေးဆွဲ၍ အာဟာရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။
(၉) မကူးစက်တတ်သော ရောဂါများဖြစ်သည့် ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ နှလုံး၊ ကင်ဆာ၊ အဆုတ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ကျဆင်းရေးအတွက် လက်တွေ့ကျပြီး ကျင့်သုံးလုပ်ကိုင်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။
(၁၀) ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးအသိပညာ စာတတ်မြောက်မှု (health literacy) မြင့်မားလာစေပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အပြုအမူများ ဖြစ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် mobile tablet ဖုန်းများအသုံးပြု ခြင်းအပါအဝင် နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် အသိပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ရန်။
(၁၁) အရည်အသွေးပြည့်ဝသော တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင်များ ပိုမိုမွေးထုတ်ရေးနှင့် တိုင်းရင်းဆေးသုတေသနကို ပိုမိုပြုလုပ်ရန်။
(၁၂) ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ အရည်အသွေးပြည့်မီစေရေးနှင့် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်။
နိုင်ငံတော်၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် သစ်တောသယံဇာတ၊ သတ္တုသယံဇာတ၊ ကောင်းမွန်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုစနစ်များကို နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအားလုံးအတွက် အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်အောင် စနစ်တကျ စီမံကွပ်ကဲရန် ဖြစ်ပါသည်။
(၁) နိုင်ငံတော်၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်။
(၂) သားစဉ်မြေးဆက် လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ရေးအတွက် ရေရှည်တည်တံ့စေသော နည်းလမ်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များကို ထုတ်ယူသုံးစွဲရန်။
(၃) ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး၊ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ တတ်နိုင်သမျှ လျော့နည်းသက်သာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများကို ဟန်ချက်ညီညီ သဟဇာတဖြစ်စေရန်။
(၄) ကာကွယ်ခြင်း၊ ထာဝစဉ်တည်တံ့စေခြင်း၊ အခြေခံ စားဝတ်နေရေးလိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မြင့်မားလာစေခြင်း၊ နိုးကြားတက်ကြွသည့်အသိ ရှင်သန်နေစေခြင်း စသည်တို့အပေါ် အခြေခံ၍ အမျိုးသားသစ်တောကဏ္ဍကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်။
(၅) ဒေသခံပြည်သူများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် ထင်း၊ တိုင်၊ မျော၊ ဝါး စသည်တို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေး ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်း (community forestyr) ကို ခွင့်ပြုပေးရန်။
(၆) မြန်မာနိုင် သစ်တောများ ပြန်လည်တည်ထောင်ရေး စီမံကိန်း (myanmar reforestation and rehabilitation programme – mrrp) ကို ရေးဆွဲပြီး သစ်တောစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခြင်း၊ သစ်တောပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။
(၇) အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြေရေးအတွက် သစ်တောစိုက်ခင်းများ တည်ထောင်ခြင်း၊ သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း၊ ထင်းအစား အခြားလောင်စာ တိုးမြှင့်သုံးစွဲရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်။
(၈) ပြည်သူလူထု၏ လူနေမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ကျန်းမာပျော်ရွှင်ရေးအတွက် သန့်ရှင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကောင်းမွန်သော ဂေဟစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်။
(၉) ဓာတ်သတ္တု၊ ကျောက်မျက်နှင့် ပုလဲအရင်းအမြစ်များကို ခေတ်မီနည်းစနစ်၊ ကောင်းမွန်သော စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်တို့ဖြင့် သင့်တင့်စွာ ထုတ်ယူသုံးစွဲရန်၊ တိုးချဲ့ရှာဖွေရန်။
(၁၀) ဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင့် ဘေးအန္တရာယ်မှ ကင်းရှင်းကြစေရန်။
(၁၁) ဓာတ်သတ္တု အသေးစား၊ လက်လုပ်လက်စား တူးဖော်မှုမျာ်းကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် တရားမဝင်တူးဖော်မှုများ လျော့နည်းပပျောက်စေရန်။
(၁၂) ပြောင်းလဲနေသည့် ရာသီဥတုနှင့် ဆိုးရွားလာသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များကို ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်ကာ လိုက်လျောညီထွေ ရှင်သန်ရပ်တည်၍ ပြန်လည်ထူထောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသည့် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း (rESILIENT SOCIETY ADAPTIVE TO CLIMATE CHANGE AND NATURAL DISASTER) တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် နိုင်ငံ၏ စက်မှုထုတ်ကုန် တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်။ နိုင်ငံတွင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် သည်လည်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးမြင့်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်။
(၁) လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံလောက်ပြည့်ဝစွာ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေးအတွက် ရေအား၊ လေအား၊ နေအား၊ အပူစွမ်းအင် (gas, coal, lng)နှင့် အခြားစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး။
(၂) နိုင်ငံတော်တွင် လက်ရှိ လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန်နှင့် အနာဂတ် စွမ်းအင်လိုလောက်မှုရှိပြီး အရန်စွမ်းအင် ထားရှိရေး။
(၃) အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အန္တရာယ်ကင်းရှင်စွာ ပို့လွှတ်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေး။
(၄) လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်၊ ပို့လွှတ်၊ ဖြန့်ဖြူးမှုလုပ်ငန်းများကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှု (eia) နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် သက်ရောက်မှု (sia) နည်းလမ်းများအရ ဆောင်ရွက်ရေး။
(၅) ပြည်တွင်း၌ရှိသော ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို ပိုမိုရှာဖွေထုတ်လုပ်ရေး။
(၆) ပြည်တွင်းမှ ထွက်ရှိသည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်အတွက် ဦးစားပေးသုံးစွဲပြီး ပိုလျှံသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ပြည်ပသို့ ရောင်းချရေး။
ပြည်သူလူထု၏ လူမှုစီးပွားဘဝများ မြင့်မားလာစေရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေ ရေးတို့အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြစ်လာရန် ဆောင်ရွက်မည်။
(၁) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသည့် ဘေးကင်းလုံခြုံသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ဖြည့်ဆည်းအဆင့်မြှင့်တင် တည်ဆောက်ရန်။
(၂) ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍများအကြား လွတ်လပ်စွာယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုနှင့် ပေါင်းစပ်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကို ထိထိရောက်ရောက် ထောက်ပံ့ဖြည့်ဆည်းနိုင်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်းကျင်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။
(၃) နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းမှုအစီအစဉ်များဖြင့် ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရေး အားပေးမြှင်တင်ရန်။
(၄) နိုင်ငံ၏ ပို့ဆောင်ရေး အရင်းအရမြစ်များကို အရည်အသွေးမြှင့်တင်ပေးရန်။
(၅) ငွေကြေးအကျိုးအမြတ် မရှိသော်လည်း ပြည်သူလူထု၏ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ထောက်ပံ့ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည့် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ်ကြီးတွင် နိုင်ငံတော်၏ ဆက်သွယ်ရေးအခန်းကဏ္ဍ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်မည်။
(၁) လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ဝန်ဆောင်မှု အရည်အသွေး မြင့်မား၍ ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိသည့် အိုင်စီတီကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်။
(၂) အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူလူထုအကြား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် အီလက်ထရောနစ် အစိုးရလုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်။
(၃) ကျေးလက်နှင့် မြို့ပြဒေသများအကြား ဒစ်ဂျစ်တယ်ကွာဟမှု လျော့နည်းစေရေးအတွက် အခြေခံ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများအား မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း အချိန်မရွေး၊ နေရာဒေသမရွေး ဖြန့်ကျက်ရရှိပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဆက်သွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်။
(၄) ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် တည်ငြိမ်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်။
(၅) အများပြည်သူအကျိုးပြု အိုင်စီတီနည်းပညာရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှု မြင့်မားလာစေရေးအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ထွန်းကားလာစေရေး တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ရန်။
(၆) ဒစ်ဂျက်တယ် ငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အပါအဝင် ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ရန်။
(၇) ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်အချုပ်အခြာအာဏာ၊ အကျိုးစီးပွားနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် လုံခြုံမှုများကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်။
(၈) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်၊ ကမ္ဘာ့စာပို့တိုက်သမဂ္ဂ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲ၍ စာပို့တိုက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်သူလူထုအတွက် အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်။
(၉) it တိုးတက်မှု၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး၊ အကျိုးနှစ်သွယ်ကို မျှတစွာ သုံးသပ်နိုင်ရေး။
(၁၀) covid အတွေ့အကြုံများ သင်ခန်းစာယူပြီး ခေတ်မီနည်းပညာများသုံး၍ နိုင်ငံယန္တရား လည်ပတ်နိုင်ရေး။
(၁) တောင်သူလယ်သမားများ လွတ်လပ်စွာ စိုက်ပျိုး၊ ထုတ်လုပ်၊ သိုလှောင်၊ ကြိတ်ခွဲ၊ သယ်ယူ၊ ပို့ဆောင်ရောင်းချခွင့် ရှရှိရေး။
(၂) ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်မှုမရှိသော လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံရမှုများမဖြစ်ပေါ်စေရေး။
(၃) ဥပဒေမဲ့ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော လယ်ယာမြေများအား ဥပဒေနှင့်အညီ ပြန်လည်စိစစ်ပြီး လယ်ယာမြေ ပြန်လည်ရရှိရေး၊ လျော်ကြေးနစ်နာကြေးရရှိရေး။
(၄) တောင်သူလယ်သမားများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းနှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းတံတားများ ပိုမိုဖောက်လုပ်တည်ဆောက်ရေး။
(၅) လွတ်လပ်သည့် တောင်သူလယ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ ပေါ်ပေါက်ရေး။
(၆) စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန် ကုန်ကြမ်းအဆင့်မှ တန်ဖိုးမြင့် စက်မှုကုန်ချောထွက်ကုန်များဖြစ်စေရန် နည်းပညာများ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် လိုအပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ထုတ်ချေးပေးခြင်းတို့ကို အထူးအားပေးရေး။
(၇) လယ်ယာကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန် လိုအပ်သည့် ငွေကြေး၊ အရင်းအနှီး၊ နည်းပညာနှင့် သွင်းအားစုများ၊ ရှရိစေရေး။
(၈) ဆန်စပါးအပါအဝင် အလားအာလရှိသော အရည်အသွေးမြင့် ပြည်ပပို့ကုန်သီးနှံများ တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ပြည်ပဈေးကွက်တွင် ထုတ်လုပ်မှုအရေးအတွက်၊ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး နှင့် ဈေးနှုန်းအရ နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိရေး။
(၉) တောင်သူလယ်သမားများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော အကျိုးတူ ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ် ပီပြင်စွာဖြစ်ပေါ်ရေး။
(၁၀) စက်မှုလယ်ယာစနစ်ကို အလားအလာကောင်းသော ဒေသများ၌ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရေး
(၁၁) လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူများ လယ်ယာလုပ်ငန်းပြင်ပ ဝင်ငွေရရှိရေးကို လေးပေးဆောင်ရွက်ရေး။
(၁၂) တောင်သူများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ အခွင့်အရေးများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အပြည့်အဝ ရှရိစေရေးအတွက် အလေးပေးဆောင်ရွက်ရေး။
(၁၃) တောင်သူလယ်သမားများ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး။
(၁၄) တောင်သူလယ်သမားများ လွတ်လပ်စွာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချရေး။
(၁၅) စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ သိုလှောင်မှု၊ ကြိတ်ခွဲမှု၊ ဈေးကွက်ရှရိမှုတို့ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေး။
(၁၆) စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ ကုန်ကြမ်းအဆင့်မှ တန်ဖိုးမြင့် စက်မှုကုန်ချောထွက်ကုန်များ ဖြစ်လာစေရန် နည်းပညာများ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ သွင်းအားစုများရရှိစေရေး လိုအပ်သည့် ငွေကြေးနှင့် အရင်းအနှီးများ ရှရိစေရေးတို့ကို တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ရေး။
(၁) နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်သားအင်အားကို စနစ်တကျနှင့် အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ရေး။
(၂) စွမ်းဆောင်ရည် ထက်မြတ်သည့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ စဉ်ဆက်မပြတ် ပေါ်ထွန်းလာစေရေး။
(၃) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြင့် မသန်စွမ်းများ အပါအဝင် မြန်မာအလုပ်သမား ထု၏ လူမှုစီးပွားဘဝကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး။
(၄) အလုပ်သမားများအတွက် လုပ်ငန်းခွင့် အေးချမ်းသာယာ၍ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သင့်တော်ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင့်များကို ဖန်တီးပေးရေး။
(၅) အလုပ်သမားများအတွက် အမှန်တကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် လူမှုဖူလုံရေးစီမံကိန်းများကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရေး။
(၆) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များအတွက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး။
(၇) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ အရေးကိစ္စတွင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပရှိ လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေရေး။
(၈) အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများကြား မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝရရှိရေး။
(၁) ကုသမဂ္ဂက ချမှတ်ထားသော စဉ်ဆက်မပြဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် (sustainable development goal – sdg) များ၊ အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗန်းရှင်း (united nations covention on the elimination of all forms of discriminatin againts women – uncedaw) ပါ ပြဌာန်းချက်များ၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်။
(၂) အမျိုးသမီးများသည် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍအသီးသီးတွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိစေရေးအတွက် ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေများ ထိရောက်ရှိစေရန်နှင့် လိုအပ်သော ဥပဒေများ ရေးဆွဲပြဌာန်း ဆောင်ရွက်ရန်။
(၃) အမျိုးသမီးများအပေါ် နည်းမျိုးစုံဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်၊ စောင့်ရှောက်မှုများပေးရန်နှင့် ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်။
(၄) အမျိုးသမီးများအား မိမိတို့ကို ကာကွယ်ပေးထားသော ဥပဒေများနည်းလည်လာစေရန်နှင့် ဗဟုသုတများ ပြည့်စုံစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
(၅) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလနှင့် မီးဖွားကာလများအတွင်း အမျိုးသမီးများသည် ဥပဒေနှင့်အညီ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိခံစားစေရန်။
ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စွမ်းရည်၊ လူ့ကျင့်ဝတ်၊ လူ့တန်ဖိုးနှင့် ဦးဆောင်မှုအရည်အသွေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ရေးစသည်တို့တွင် သာတူညီမျှ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော လူငယ်များအဖြစ် ပျိုးထောင်ပေးပြီး နိုင်ငံ့သားကောင်းလူငယ်များ ပေါ်ထွန်းလာရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။
(၁) လူငယ်တို့၏ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်။
(၂) ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး စသည့်ကဏ္ဍတို့တွင် အရည်အချင်းပြည့်မီသော လူငယ်များ ပါဝင်နိုင်မည့် အနေအထားကို ဖော်ဆောင်ပေးရန်။
(၃) လူငယ်များတွင် ကျား/မ လိင်စိတ်ကိုင်းညွှတ်မှုနှင့် လိင်ဝိသေသ ခံယူမှုအရသော်လည်းကောင်း၊ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအရသော်လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်ကိုးကိုယ်မှု ဘာသာအရလည်းကောင်း၊ မသန်စွမ်းမှုအရသော် လည်းကောင်း၊ ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆင်ရာ အခြေအနေအရလည်းကောင်း စသည့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ ကင်းရှင်းရန်။
(၄) လူငယ်များ၏ တီထွင်ဆန်းသစ် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းများကို မြှင့်တင်အားပေးရန်။
(၅) လူငယ်များအတွက် အာမခံချက်ရှိသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရေးစနစ် ပေါ်ပေါက်လာစေရန်။
(၆) လူငယ်အသင်းအဖွဲ့များ ပေါ်ပေါက်လာစေရန်နှင့် လူငယ်စင်တာများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်။
(၇) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက်နှင့် လူမျိုးစုအလိုက်အထိ မတူကွဲပြားသော လူငယ်များ သာတူညီမျှ ဖွံ့ဖြိုးနိုင်မှုအတွက် အခြေခံကောင်းများရှိရန်။